Ungayikhuphela njani imifanekiso kuGoogle Earth -iMephu zikaGoogle -Bing -Imifanekiso yeArcGIS kunye neminye imithombo- iGeofumadas
Ikhaya/Okufumaneka/Indlela yokukhuphela imifanekiso esuka kwiGoogle Earth - iGoogle Maps - iBing - i-ArcGIS Imagery kunye neminye imithombo
OkufumanekaGoogle umhlaba / imephuEhlabathini elungileyo
Kwabaninzi babahlalutyi, abafuna ukwakha iimephu apho ireferensi ye-raster yalo naliphi na iqonga elinjengoGoogle, iBing okanye umfanekiso weArcGIS uboniswa, siqinisekile ukuba asinangxaki kuba phantse naliphi na iqonga linokufikelela kwezi nkonzo. Kodwa ukuba into esiyifunayo kukukhuphela loo mifanekiso kwisisombululo esifanelekileyo, ke zeziphi izisombululo ezinje StitchMaps zinyamalale, ngokuqinisekileyo isisombululo esihle kunazo zonke yiSAS Planet.
SAS Planet, yinkqubo yasimahla, enemvelaphi yaseRussia, ekuvumela ukuba ufumane, ukhethe kwaye ukhuphele imifanekiso emininzi kumaqonga ahlukeneyo okanye kwiiseva. Ngaphakathi kweseva, uGoogle Earth, uGoogle Maps, iYahoo, iBing, iNokia, iYandex, iMephu zeNavitel, iVirtualEarth, iGurtam inokufumaneka kwaye ukugcwala kungongezwa kumfanekiso, njengeelebheli okanye ulwakhiwo lwendlela- into ebizwa ngokuba yi-hybrid- . Phakathi kweendaba zayo, ungadwelisa:
ibe isicelo esilungileyo ngokupheleleyo, ayifuni ukufakwa kwanoma yiluphi uhlobo, ngokukusebenzisa oko kunokwenzeka ukuba kwenziwe nayiphi na inkqubo,
inokwenzeka yokungena kwiifayile ze - .KML,
ukulinganisa kwemida kunye nemizila
umthwalo wenkcazelo eyongezelelweyo esuka kwamanye amaseva njenge Wikimapia,
Ukuthunyelwa kweemephu kwii-mobiles, ezihambelana neeplatifomu ezifana ne-Apple-iPhone.
Ngomzekelo osebenzayo, kuya kubakho ukubonwa ngendlela ebonakalayo amanyathelo okukhipha ulwazi kwifomathi ye-raster nakweyiphi na kula maqonga akhankanywe apha ngasentla. Enye yeenzuzo zayo ezinkulu kukuba imifanekiso ekhutshelwe kwesi sicelo ifunyenwe kwisimo, esigcina ixesha kulwakhiwo lweemveliso. Kwahlukile kwinto eyenzekayo ngemifanekiso kaGoogle Earth, zinokugcinwa-zikhutshelwe, kodwa zifuna iinkqubo ze-georeferencing ezilandelayo, eziguqula ixesha.
Ukulandelelana kwamanyathelo okukhuphela imifanekiso
Ukukhetha okukhawulezayo kwendawo yomdla
Inyathelo lokuqala kukukhuphela ifayile equlathe isifakeli sePlanethi ye-SAS, kule meko kusetyenziswa inguqulelo yamvanje esetyenziselwa ukusetyenziswa koluntu ngoDisemba 2018. Ifayile ikhutshelwa kwifomathi ye.zip, kwaye ukuze isebenze, kufuneka iziphu ifayile. umxholo ngokupheleleyo. Ukugqitywa, indlela eya kuyo ivula kwaye iSasplanet ephunyeziweyo ifumaneka
Xa uqhuba inkqubo, imbono ephambili yesicelo ivula. Kukho iibarbha eziliqela (umbala oluhlaza), kunye nemenyu esemqoka yesicelo (umbala obomvu), imbono ephambili (umbala we-orange), ukutsalonga kwembono (umbala ophuzi), imeko enxulumene nayo (umbala we-violet), ibha karhulumente kunye neenkcukacha (umbala we-fuchsia).
Ukuqala ukukhangela, ukuba uyazi ukuba yintoni indawo efunekayo, ufika kwimephu yombono ophambili, de uze ufike kwindawo efunwayo, kwenye yeetrabars ozikhethayo umthombo wolwazi lwe-raster, kweli livela kwiGoogle .
Ukuba ufuna ukutshintsha umthombo wenkcazelo, zicofwe kanye apho igama isiseko kubonisiwe, kukho lukhethwe ku: Google, Yandex, Nokia, Kosmsnimki, Navteq, Genplan of eMoscow, GeoHub, Bing, Geoportal, Yahoo! , nezinye iimephu, yimbali, ukhenketho, iimephu zaselwandle, Space, iimephu zasekuhlaleni, OSM, ESRI, okanye Google Earth.
Emva kokhetho, ukukhethwa kwendawo efunekayo kwenziwa. Ngokuxhomekeke kwindlela i-raster ejongwa ngayo, umncedisi ukhethwe, umzekelo wesithombe seGoogle esisetyenzisiweyo, kuba asizange iqule naluphi na uhlobo lwefu elikhoyo kwindawo.
Emva koko, iqhosha liyasebenza Shift, kunye nale ndawo yokufunda iya kukhethwa ngesikhokhelo. Chofoza nje kwikhonkco uze udibanise kwindawo efunwayo, ukhetho lokugqibela lwenziwe, kwaye iwindi iwucala, apho kufuneka sibeke iimpawu zemizila yesithombe esikhethiweyo.
Kwifestile, amathebhu ambalwa ayabonwa, ngowokuqala kubo Ukukhuphela, inqanaba lokusondeza likhethiwe. Amanqanaba okusondeza aqala ku-1 ukuya ku-24 - esona sisombululo siphezulu. Xa umfanekiso ukhethiwe, kwi-zoom bar, inqanaba liyaboniswa, nangona kunjalo, kule festile inokutshintshwa. Ikwabonisa iserver apho imveliso iza kukhutshwa khona.
Kwisithuba esilandelayo, iiparitha zerhafu zifakwe. Ngokukodwa ukuba i-raster iyakusindiswa ngolwazi lwenkcukacha yendawo. Kule (1) bhokisi, umfanekiso kubume eboniswe bhokisi (2) imveliso umendo, ibhokisi (3) ekhethiweyo umncedisi kwi (4) bhokisi ukuba kukho umaleko uzaleke, ku ibhokisi (5) ukucaciswa kukhankanywe, ngoko iqela libizwe Yenza ifayile ye-georeferencing (6), inketho efanelekileyo kakhulu imakwe, kulo mzekelo .w, umgangatho ushiywe ungagqibekanga kwi-95%, kwaye ekugqibeleni nqakraza qalisa,
Umfanekiso iye ngaphandle ngefomathi JPG, kodwa ngaphandle kwi iifomati zilandelayo: PNG, BMP, ECW (ucinezelo Wavelet yokuPhucula), JPEG2000, KMZ for Garming (JPEG ngegolide), RAW (single bitmap graphic), GeoTIFF.
Ukuba uhlolisisa ifolda apho umfanekiso ugcinwe khona, iifayile ze-4 zichongiwe, ifayile ye-raster .jpg, ifayile engancedayo, kwaye i-jpgw iyabonwa (le yifayili yereferensi eyenziwe ngaphambili .w), kunye ne-.prj ehambelana nomfanekiso.
Uboniso olukhawulezayo kwi-SIG
Emva kokuba nenkqubo, ifayile ivuliwe kwiphina isofthiwe ye-GIS ukukwazi ukuqinisekisa ukuba umfanekiso wendawo efunekayo. Ukuqhubeka, kwiprojekthi ye-ArcGIS Pro, izalathisi zilayishwe kwifomathi yefomathi, ezibonisa indawo apho kufuneka kufakwe umfanekiso otshanje ukuthunyelwa.
Xa uvula, unokubona ukuba umfanekiso uhambelana ngokupheleleyo, kunye neemeko kwifom yefom yeembono eziphambili, oko kukuthi, kunye nezidumbu zamanzi kwifomathi ye vector. Umthombo okhoyo kumfanekiso ulungele indawo ye-polygon, ngoko ke kuthathwa njengento echanekileyo
Ukuba ufuna ukukhipha idatha ye-raster kunye nomxholo, njengezitrato kunye neendlela, kwaye uyisebenzise kumadivayisi eselula kwindawo yomsebenzisi, inkqubo efanayo yokukhethwa kwendawo yomdla iyenziwa.
Ukwahlula kukuba ngoku idatha yedatha ye-Bing izakuthathwa, kwenguqu yayo iindlela - izitalato, imbono ephambili ibonisa kuphela iindawo ezichaphazelekayo, kunye namagama ezitalato ezisisitalathweni, ukuba uqhubeka nokujonga imbono ephambili, iinkcukacha ezinxulumene nommandla wesifundo zilayishiwe.
Ngoku, ukuba i-raster yangaphambili iyadingeka ukuba ibe nedatha yeemephu zeendlela kunye namasayithi anomdla olayishiwe, kuphela hybrid - i-hybride, elula nje ingqalelo kwi data ukusuka kwiindawo ezibhekiselele kuzo, kunye nomfanekiso we-raster.
Kwipaneli yecandelo, kukho iqhosha elincomekayo, xa ufika khona, zonke iziseko zemibala ezinokuthi zigqitywe nge-raster ziboniswa. Ukusuka kwiGoogle, OSM - Open Street Maps, Yandex, Rosreestr, Yahoo Hybrid, Hibrid Wikimapia, Navteq.
Emva koko, ngenxa yesiseko se-raster, iseva ye-Bing-iStatellite isetyenziswe, ngoko ingeniswa kwimenyu hybrid, kwaye njengoko uninzi lufuneka lusebenze, oku kugqiba ukuba yeyiphi kwezi ebume unolwazi oluninzi lwendawo, umzekelo ukhethwa: i-Google, OSM, Wikimapia, kunye ne-ArcGIS hybrid, imbono ye-raster eneziqendu ezingaphezulu ziboniswe ngezantsi.
Ukugcina umfanekiso, kunye nedatha ebume, imbonakalo ikhethwe njengamaxesha adlulileyo, kodwa ngeli xesha, xa isikrini seerameters of the image siboniswa, oku kukhethiweyo kuluhlu kutyana, ifomathi yomkhiqizo, umzila wokuphuma, i-raster base (Bing) ifakwe, kwaye Uluhlu obunxweme -IGoogle Hybrid yakhethwa-kunye nefayile yesalathiso yendawo .w.
Emva kokuba inkqubo iqhutywe, umfanekiso uvuliwe kwi-SIG okanye isofthiwe ekhethiweyo, kwaye iqinisekisa ukuba umfanekiso kunye ne-data hymrid yeGoogle Hybrid yayithunyelwa ngaphandle. Iibhile zeempawu ezikhoyo kwindawo yomdla ziboniswa, kwaye xa ukuma kufakwa, kufumaneke ngqo apho umzimba wamanzi kufuneka uhambe khona.
Inkqubo yeli nqaku inokubonwa kwisiteshi se-Youtube seGeofumadas
Njengoko kunokuqinisekiswa, ukusetyenziswa kwesixhobo kulula kakhulu, akufuneki ukuba kwenziwe iinzame ezinkulu zokuqonda amandla enkqubo nganye kunye nezixhobo ezizenzileyo. Ke ngoko, ukusetyenziswa kwayo kuyacetyiswa kakhulu.
Ngokungafani namanye amanyathelo kulo msebenzi wokukhuphela imifanekiso ye-georeferenced, efana neyo I-StitchmapIndaleko ebenayo i-SASPlanet inokuhlawulelwa, esoloko isongeza izixhobo kunye nokusebenza kuhlaziyo ngalunye, kunye nokufikelela kwiinkonzo ezininzi nangakumbi. Eli nqaku lenziwe kusetyenziswa uguqulelo oluzinzileyo lwamva nje, ukusukela nge-21 kaDisemba ngo-2018, nangona kunjalo sikunika eli khonkco, kwiphepha elisemthethweni, eliqukethe indawo yokugcina zonke iinguqulelo ezikhutshwe ukusukela ngo-2009.
Ndiyakuvuyela iSASPlanet kunye neminyaka ye-10 yokuqhubeka.
Iintsomi ezi-5 kunye neenyani ezi-5 ze-BIM - ukuhlanganiswa kwe-GIS
IForam yeHlabathi yeGeospatial-2019
ngileyo. Nabani na ofuna ukufunda ukuhlela imifanekiso esincoma ukuba niyityelele iifoto photoshop madrid
wonke umntu osemzini.